The kupfuura zvibereko, nyatsoshanda, dekara, uye zvakakunakira nzira kubhururuka ndeyokuita ichibhururuka private. Zvaizoguma zvaita kuti 20% zvimwe negoho. Pane rimwe divi, kubhururuka yezvokutengeserana zvinoisa 40% donha mu negoho.
With Executive private ndege chata iwe kunze nguva nekuti, jeti wako haana kubvisa kubva dzendege zvikuru kuti vane zvisingaperi muboka revatungamiriri. A private jeti anogona kuzobva imwe nhandare yendege muduku. Kune vazhinji duku kupfuura dzendege mikuru.
Chete shanu private jets nyika uye ngaubve mikuru dzendege. Airports vane shoma motokari kubata kupfuura 50% oga jets. 30% pamusoro jets iyi ikabva yechipiri dzendege.
Fly Kana Uchida
With dzokutengesa vendege, iwe purogiramu yako kuti zvinodiwa nomunhu vendege. With Executive private ndege chata, ndiyo imwe nzira rwakapoteredza.
The omukati ane private ndege vari zvinoshamisa. Vane kusiyana chinhu zvamaona. Vamwe jets vane omukati yakashongedzwa nendarama nesirivha. Unogona kuwana jets pamwe tepi Pazvibato akaafukidza 24 carats goridhe. Other inotonhorera zvishongedzo pamusoro jets izvi zvinosanganisira goridhe singi nembiya, chigaro tsenhama mabhatani uye zvikuru kwoumbozha kuchengeteka bhandi Hardware.
The Cream pamusoro Society Nhunzi Private
Izvi zvinosanganisira Bill Gates, John Travolta, Oprah Winfrey, Jackie Chan, uye Tom Cruise. John Travolta muridzi jets gumi private kusanganisira Boeing 707. Jay-Z ane Bombardier Challenger 850 uye, Tom Cruise ane Gulfstream IV. Top yemakambani execute kubva Google, Microsoft, Coca-cola, uye nezvimwe Fortune 500 Makambani nendege private. Makambani Small uye mid-kadikidiki vanoumba boka chikamu private ndege kushandiswa zvakanaka. High-pamwero Entrepreneurs uye Hollywood vakakurumbira vari kushandisa private jets. Technical, okutengesa, uye nyanzvi basa kushandisawo kwadzinoita ichi pakufamba.
Haufaniri neImba jeti private kunakidzwa zvoumbozha uye mukurumbira kubhururuka private. Unogona bhuku rokuva private ndege bumbiro chokufambisa hwako.